News - White pear vs acha nkume pel
Nkume ndị ahụ nwekwara àgwà ndị tụrụ àgwà. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ emechabeghị mechie ihe mere agba jiri jiri okwute mara mma, enwere ike ikwubi site na agba peal na agba pear nwere nnukwu mmekọrịta ha na nne nke pearl na-azụ ha. A na-amịkarị Pearl Ndị Osimiri na ọlaedo a na-agba ọlaedo, ebe a na-emepụta peel ojii na mkpochi ojii.
Nkume anyị na-ahụkarị na-acha ọcha, ya mere ọtụtụ ndị na-eche banyere ọla pel dị ọcha mgbe ha kwuru banyere pearl. N'ezie, nke a bụ naanị nro. pink na odo na-achakarị na mmiri mmiri mmiri n'oge na-adịbeghị anya.
Agba ndị ahụ achagoro nke ọma na ọganihu nke teknụzụ na-akọ pel. Colordị kachasị mkpa ịhọrọ dabere na mmasị onwe gị, mana biko payaa ntị na agba pealu ahụ bụ ihe okike ma doo anya, ma zere ịzụrụ nkume pel.
Post oge: Jul-14-2021
Pearl Stud ọla ntị, Nkịtị Mmiri Ọhụrụ, White Gray Freshwater Ọla Pel, Sterling Silver Pearl Mgbaaka, Aaa Mmiri Ahia, Freshwater Pearl Bridesmaid Onyinye,
Mkpụrụ Obi Nwunye